Uluhlu lokuThengisa nge-imeyile kwiiholide
Uluhlu lwenqaku le-5 lokuThengisa nge-imeyile uLuhlu lokujonga
NgoMvulo, Agasti 20, 2012 NgoMgqibelo, Oktobha 25, 2014 Itempile yaseLavon
Kukuwa okuthetha ukubuyela kuthengiso lwesikolo kugcwele kwaye abafundi basendleleni ebuyela kwigumbi lokufundela. Nangona kunjalo,
Ixesha. Yazi ukuba nangona ingo-Agasti kuphela, abantu abaliqela sele beqalisile ukujonga izimvo zesipho. Ukuba bayifumana ngexabiso elifanelekileyo, baya phambili bayokuthenga ukuze babe ngaphambili komdlalo. Beka ii-imeyile zakho kubaphulaphuli kunye nokwenza ii-imeyile zokubamba abo bathengi. Ewe eminye yemihla ephambili ofuna ukuyilungiselela nguLwesihlanu omnyama kunye noMsombuluko weCyber, kodwa kuya kufuneka unikezele ngexabiso kubabhalisi bakho ngalo lonke ixesha leholide.
Izikhokelo zeholide. Malunga neeholide lelinye lawona maxesha abathengisi be-imeyile abanokuphuma ngaphandle kwebhokisi kwaye bongeze iholide encinci kwiitemplate zabo. Uyilo olongezelelekileyo luya kukhuthaza ababhalisile ukuba bacofe kwaye bathenge.
Iidili kunye noKhethekileyo. Thumela izikhumbuzo kubabhalisi bakho njengoko iiholide ziqala ukusondela. Faka amakhuphoni okanye iingcali zezipho ezinokubakho kumalungu osapho, kubahlobo, nakwititshala yabantwana. Ababhalisi baya kuyivuyela into yokuba ubenzele umsebenzi kwaye ubanikile nezimvo zabo.
Ifowuni. Kwakukho isixa esikhulu semali yabantu abathenga izinto ngeefowuni zabo ngeeholide zalo nyaka. Kulo nyaka, kufanelekile ukuba indawo yakho yenzelwe ukuhanjiswa. Ufuna ukuqiniseka ukuba kulula kubabhalisi ukuba bahambe kwaye basebenzise. Ukuba akunjalo, baya kushiya kwaye bafumane umntu okhuphisana naye oza kuthenga endaweni yakhe.
Fumana uLuntu. Ndiyathemba ukuba sele ubandakanya amakhonkco entlalo kwii-imeyile zakho. Nangona kunjalo, ngeeholide, kubaluleke ngakumbi ukongeza ezi kwaye ubabonise! I-Pinterest ithathe inyani kulo nyaka kwaye abantu abaninzi bathambekele kuyo. Ukuba inkampani yakho inobukho apho, unokufuna ukuhambisa ababhalisile kwiprofayili yakho ukuze ubone iimveliso ngokubonakalayo kunye nokuthenga.
Ezi zimbalwa zeengcebiso zokuqala ukuphumeza ukucwangciswa kwe-imeyile yakho yeeholide. Zeziphi ezinye iingcebiso okhe weva ngazo kwaye ucinga ukongeza kwimikhankaso yakho ye-imeyile yeholide?
tags: nezahluloiholideUluhlu lokujonga iholideUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiSocial Media Marketingezizodwaitemplatesisikhathi
Ukugqibelela kweBrand xa kuthelekiswa neSantya soMxholo
Amanqaku eKlout abuyiselwe ngokutsha… kwaye ndiyawathanda!
Agasti 20, 2012 kwi-10: 14 AM
Uh-oh… ingaba sele ilixesha lokuba uqalise ukucwangcisa? 🙂